Nduku na-eto eto nke mpaghara Novosibirsk - magazin "Potato System"
Nduku na-eto eto nke mpaghara Novosibirsk
Chidinma Leshchenko, Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ugbo na mpaghara Novosibirsk
Ókèala: 177,76 puku sq. km
Onu ogugu: 2 798 170 ndi mmadu, nke 79,21% bu ndi bi na obodo.
Ọnọdụ ala: Mpaghara Novosibirsk dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke West Siberia Plain. N'ebe ugwu, ọ dị na mpaghara Tomsk, na ndịda ọdịda anyanwụ - na Kazakhstan, na ọdịda anyanwụ - na mpaghara Omsk, na ndịda - na Territory Altai, nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ - na mpaghara Kemerovo.
Ihu Igwe kọntinent, siri ike karịa mpaghara Europe na America ndị dị n'otu ohere ahụ. A na-akpọ oge anọ nke afọ. Oge oyi siri ike na ogologo oge nwere mkpuchi snow siri ike site na 20 cm na ndịda ọdịda anyanwụ ruo 50-70 cm n'ebe ugwu, n'oge ụfọdụ nwere ifufe siri ike na oke ikuku. Nkezi ọnọdụ okpomọkụ Jenụwarị: -18 ... -20 ° С. Oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ, mana obere - site na 90 ruo ụbọchị 100 na mgbago ugwu ma rue ụbọchị 120-130 na ndịda. Onwa kacha ekpo ọkụ bụ July (+ 19 ... + 25 ° С).
Oge mgbanwe (oge opupu ihe ubi, ụbịa) dị mkpụmkpụ ma bụrụ nke ihu igwe na-adịghị agbanwe agbanwe, nlọghachi nke ihu igwe oyi. Ala ntu oyi na-amalite na nkera nke abụọ nke September na njedebe na njedebe nke May.
Ogologo mmiri ozuzo kwa afọ bụ 414 mm (site na 290 ruo 540 mm). Ihe ruru 70% nke mmiri ozuzo na-ada n'ụdị mmiri ozuzo, ọ na-abụkarị mmiri ozuzo na égbè eluigwe. N'ime ndị a, 20% dara na Mee-June, ọkachasị, na oge site na Eprel ruo Ọktọba enwere (na nkezi) 330 mm nke ọdịda, na oge site na Nọvemba rue Machị - 95 mm. N'ebe ndịda na ndịda ọdịda anyanwụ, ikuku na-emeri. A na-ahụ ifufe na mmiri ozuzo na mpaghara ndịda steppe. Oge uto: site na 144-148 ụbọchị n'ebe ugwu ruo ụbọchị 158-163 na ndịda.
Enyemaka: tumadi ewepụghị. Akụkụ mpaghara ahụ, nke dị n'aka ekpe Osimiri Ob, nwere larịị dị larịị dị ala (120 m n'elu elu osimiri) nwere mgbatị enyemaka dị ka mmadụ nke dị 3-10 m. Aka nri nke Ob ka dị elu ma dịkwa elu. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke mpaghara ahụ bụ ugwu Salair nwere ebe kachasị elu na mpaghara ahụ (502 m n'elu elu osimiri).
Ala: ọ kachasị oke ọhịa na podzolic. N'ihi apịrị mmiri nke akụkụ dị mkpa nke mpaghara mpaghara ahụ, nnu nnu nke mmiri na-akpụ ala na mmiri mmiri, ala mmiri saline ebe niile mepụtara: ala ahịhịa-chernozem, ahịhịa, boggy, ala mmiri nnu, nnu nnu na malt.
Ala ubi ebe a na-akọ ugbo: 7752,475 puku hectare.
Mpaghara Novosibirsk dị na ise na mpaghara Siberia Federal District maka usoro nduku. Banyere otu ọdịbendị a si dị mkpa maka mpaghara ahụ ma enwere atụmanya maka ịbawanye mmepụta, anyị na Minista Ọrụ Ugbo nke Novosibirsk Region E.M. Leshchenko na-ekwurịta okwu.
- Evgeny Mikhailovich, poteto enweghị ike ịkpọ isi ihe ubi maka mpaghara Novosibirsk. Ma, ọ ka nọ ebe dịkarịsịrị mkpa na mpaghara akuku?
- Na 2019, akuku akuku nke akuku a na ugbo nke uzo nile ruru 19,7 puku hectare, na 2020 obere ihe - puku 18,3. Mpịakọta nke nnukwu owuwe ihe ubi na 2019 bụ 299,4 puku tọn.
Ọ ga-amasị m ịmara na mpaghara niile nke mpaghara a na-arụ ọrụ na nduku. Na 2019, enwetara ihe kachasị elu na mpaghara Novosibirsk - 47,9 puku tọn, Ordynsky - tọn 30 puku, Moshkovsky - tọn 26,3.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mgbe ahụ na nzukọ ndị ọrụ ugbo 2019 na ugbo ọrụ ugbo na mpaghara ahụ ekenyela hectare 3,6 puku maka ịmị mkpụrụ. Olu nke nnukwu owuwe ihe ubi ruru 72,5 puku tọn. Onu ogugu bu 213,3 c / ha.
Na 2020, a kụrụ nduku na mpaghara nke hectare 2736.
Na ngụkọta, ụlọ ọrụ ugbo 13, ndị ọrụ ugbo 32 (ọrụ ugbo) na ndị ọchụnta ego ọ bụla na-arụ ọrụ ịmị mkpụrụ na mpaghara. Ha niile na-arụsi ọrụ ike iji teknụzụ ịkọ ihe n'oge a.
Nnukwu anya na akuku a (ha ruru 67,6% nke mkpokọta nduku mepụtara na ụlọ ọrụ ugbo, ọrụ ugbo na ndị ọchụnta ego ọ bụla) kwụrụ ụgwọ site na: ZAO SPH "Yarkovskoe", IE Leonidov AP, OOO LEONiS, OOO OPH "Dary Ordynska", LLC "Ubi nke Giant". Enwetara nnukwu uru nke mmepụta nduku na LEONiS LLC (268,8%), Sady Giganta LLC (121,4%), SIBKRA LLC (120,7%).
- Enwere mmemme mmemme mpaghara iji kwado nduku na-eto eto na mpaghara Novosibirsk?
- Dịka iwu nke Gọọmentị nke mpaghara Novosibirsk nke 02.02.2015 Mba 37-p "Na mmemme steeti nke mpaghara Novosibirsk" Development nke ugbo na ụkpụrụ nke ahịa maka ngwaahịa ugbo, akụrụngwa na nri na mpaghara Novosibirsk "na-enye ndepụta nke usoro nkwado steeti nyere site na gọọmentị etiti. na mmefu ego mpaghara: ịkwụghachi akụkụ nke ego nke ịrụ ọrụ mgbagwoju anya nke ọrụ agrotechnical, nkwụghachi nke akụkụ nke ọnụahịa ịzụta ndị isi na mkpụrụ mbụ, nkwụghachi nke akụkụ nke ọnụahịa ịzụta ụzọ ọrụ na akụrụngwa.
- Kedu ụdị poteto ndị a na-akọkarị na mpaghara ahụ? E mepụtara mkpụrụ nduku?
- Site na ozi nke ngalaba nke Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" nyere na mpaghara Novosibirsk, dabere na nyocha nke akụkọ banyere mkpụrụ akụ maka afọ atọ (2018-2020), ụdị ndị a kachasị ewu ewu na ugbo ugbo nke mpaghara Novosibirsk: Gala, Tuleevsky, Rozara, Red Scarlett, Lina.
Mpaghara ahụ na-egbo mkpa ya maka ihe ọkụkụ dị elu. Sib-NIIRS (ngalaba nke ICG SB RAS), KFH "Nastenka", ZAO SPH "Michurinets" bụ ọkachamara na-eto eto mkpụrụ nduku na mpaghara ahụ.
- Companylọ ọrụ PepsiCo na-aga imeghe osisi maka mmepụta nke ibe na mpaghara Novosibirsk. Companieslọ ọrụ ndị ọrụ ugbo adịla njikere ịkọ ụdị nduku?
- N'ezie, ndị na-arụ ọrụ ugbo anatala atụmatụ PepsiCo iji wuo ụlọ ọrụ nhazi na mpaghara anyị jiri oke ịnụ ọkụ n'obi. N'ọdịnihu, ọtụtụ ugbo ga-achọ ịbụ otu n'ime ndị na-eweta ya. Na nke a, na 2020, ndị ọrụ ubi nke mpaghara ahụ abawanyela ebe ị na-akụ mkpụrụ nduku.
N'ezie, anyị niile ghọtara na ịmepụta ngwaahịa dị otú a chọrọ ezigbo ihe ọmụma na nkà, mana ndị mmadụ dị njikere ịmụ ihe.
Na Nọvemba 2019, n’oge ngosi ihe ubi agro-ulo oru mba uwa “Siberia Agrarian Week”, a haziri okpokoro okirikiri "Teknụzụ agwakọtara maka ịmị mkpụrụ nduku", nke mere ka ọtụtụ ndị nwere mmasị ịkọ ugbo wee zukọta. Ndi gbara ya gburugburu natara otutu ozi (tinyere n’aka onye nnochite anya PepsiCo) banyere iwu nke nkwadebe ala, ihe di iche iche nke iku na iwe ihe ubi. Echere m na nke a abụghị ihe omume ikpeazụ nke ụdị a.
- Na 2017-18, ndị mgbasa ozi bipụtara ozi banyere okike nke ụyọkọ nduku Russia-China na mpaghara Novosibirsk. Ihe oru a ọ ga-aga n'ihu?
- O di nwute, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mmepụta nduku na mpaghara a na-ebelata maka ọtụtụ ihe. Ogo nke afọ ojuju na ngwaahịa a bụ 84,0% (yana iji onwe gị na ọnụego nke 94,1 n'arọ kwa isi ala). N'iburu nke a n'uche, a na-ahụta ịmepụta otu ụyọkọ nduku Russia na China n'ógbè ahụ dị ka ihe na-adịghị mkpa. Mana agbanyeghị, anyị anaghị akwụsị ọrụ a ma ga-alaghachi n'echiche ya mgbe afọ ojuju na poteto ruru 100%.
- Ndi Novosibirsk ugbo ụlọ ọrụ na-enye nduku na mba ọzọ?
- Dabere na ngalaba nke Federal Service maka Veterinary na Phytosanitary Supervision, na 2019, ndị na-akọ ugbo na Novosibirsk na-ebupụ ihe dị ka tọn 60 nke poteto ware. E zigara ndị mmadụ na Republic of Kazakhstan. Nọmba ndị ahụ pere mpe, mana n'ọdịnihu anyị na-eme atụmatụ ịbawanye mpịakọta mbupụ ma nye aka nye ndị na-akọ ugbo na-achọ ịrụ ọrụ na ntụzịaka a (nkwado adịlarị ugbu a n'ime usoro mpaghara mpaghara "Mbupụ nke Ngwaahịa Ugbo")
- Ndi usoro nchekwa nduku emeputara na mpaghara?
- Ulo oru ulo oru ugbo 27 nwere ikike ichekwa onwe ha maka akwukwo nri na poteto di na mpaghara a, mkpokọta ebe nchekwa bu 60,4 puku tọn. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ atọ nwere nnukwu ụlọ nchekwa na-enye ohere itinye ngwaahịa na 15-16,5 puku tọn.
Ka ọ dị ugbu a, nwughari nke ebe nchekwa nduku (nke nwere ikike nke 12 puku tọn) na JSC SPH "Yarkovskoye" na-aga n'ihu.
- Na 2015, mpaghara Novosibirsk mere emume ncheta afọ 120 nke mbido ọrụ nrụzigharị na steepụ Barabinskaya. Ndi mpaghara a metụtara oke ala taa? Mpaghara ala ubi mmiri ọ na-eto?
- Kemgbe 2015, anyị na-etinye usoro subprogram nke mmemme steeti “Mmepe nke iweghachi ala ubi na mpaghara Novosibirsk”. N'oge a, ụlọ ọrụ ugbo nwetara 108,9 nde rubles dị ka nkwado nke steeti, gụnyere 77,9 nde rubles na mmefu nke mmefu ego obodo, 31,0 nde rubles na mmefu nke mpaghara mmefu ego, 5 melioration usoro e wuru ma wughachi na ngụkọta mmiri mpaghara. 1,9 puku hectare.
Mpaghara ala mmiri gbara na mpaghara Novosibirsk bụ hekta 36,9, nke hekta 35,8 bụ ala ubi.
- Ndi oru nta akuko dere otutu ihe banyere unwu na mpaghara Novosibirsk n’afọ a. Ọnọdụ ihu igwe siri ike ọ ga-emetụta ihe ọkụkụ nduku?
- Site na mbido August, etinyere ọnọdụ mberede nke ọchịchị obodo site na ihicha nke ala na 17 n'ime mpaghara 30 nke mpaghara ahụ, ọtụtụ n'ime ha dị na ndịda na ndịda ọdịda anyanwụ nke mpaghara ahụ. A na-eme nyocha mmebi ugbu a na mpaghara ndị metụtara. Na mpaghara nwere ihe mberede, etinyere isi ụlọ ọrụ iji chịkwaa omume na ịnakọta ozi arụmọrụ. Isi ụlọ ọrụ, na nkwado nke ndị isi nke otu ọrụ ugbo, ndị isi nke ugbo, ndị ọchụnta ego n'otu n'otu na-arụ ọrụ ugbo, were usoro iji belata mmebi. N'ụzọ doro anya, a gaghị enwe owuwe ihe ubi edetu na afọ a, mana ọnọdụ dị n'ubi nduku abụghị ihe dị oke egwu: n'oge a, ọ nweghị ọnwụ nke akuku nduku achọpụtara.
TOMRA Food na-ewetara igwe eji edozi ohuru
Udo nke uche maka Aviko Belgium